UPDATE: Maxaa ka jira in Xal laga gaaray xiisad ka dhalatay dilka taliyihii Ciidanka Gorgor? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Maxaa ka jira in Xal laga gaaray xiisad ka dhalatay dilka...
UPDATE: Maxaa ka jira in Xal laga gaaray xiisad ka dhalatay dilka taliyihii Ciidanka Gorgor?
Muqdisho (Halqaran.com) – Ilo lagu kalsoonyahay ayaa mareegta Halqaran.com u xaqiijiyay in xal laga gaaray xalay xiisadii ka dhalatay dilkiii Taliyihii Ururka Gorgor ee ka tirsan Ciidanka Kumaandooska Xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Maxaadeey Suleymaan oo Habeenkii Sabtida lagu dilay is rasaaseyn ka dhacday agagaarka Hotelka Naasa-Hablood 2 balse loo bedelay Magaca Hotel Maa’ida.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa jirtay in Ehelada Marxuumka ay diideen in la’aaso meydka ilaa laga soo cadeeyo cida dishay iyo sababta loo dilay taas oo keentay in mudo Saddex Cisho ka badan u yaallo Meydkiisa oo aan la duugin.
Kulan xalay ka dhacay Hotelka Naasa-Hablood 2 iyo dadaalo ay hormuud ka ahaayeen Ugaas Maxamuud Cali Ugaas iyo Imaam Maxamed Yuusuf Cali ugu dambeyn waxaa ay suurtageliyeen in Ehelada Marxuumka ay ogolaadaan in meydka la’aaso, isla markaana wixii kale oo qorsho ah dib la isugu soo laabto.
Warka ay haleyso Halqaran.com ayaa intaasi waxa ay ku dareysaa in wixii mas’uuliyad ah ee dilkaasi uu qaatay Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow Ducaale, isla markaanka Marxuumka saaka lagu aasayo Isbitaalka xoogga dalka loona saaray Guddi qaban qaabiya Aaska.
xiisad ka dhalatay
Xil laga gaaray dilkii taliye Gorgor